i-ABC Motsepe League Archives - Impempe
Category: i-ABC Motsepe League
ULarsen usebheke ukuyifaka kwiGladAfrica Championship iDynamos
Alfred Ngubane Umqeqeshi weSummerfield Dynamos ewine Isigceme A kwi-ABC Motsepe League KwaZulu-Natal, uClinton Larsen ulindele ubunzima obuphindiwe uma ezakhe sezidlala owokuhlunga neGWP Friends. IFriends iyona ewine Isigceme B esinamaqembu aphakathi nezwe eKZN njengoba besihlukaniswe phakathi […]
Leave a commentEzakamuva, i-ABC Motsepe League, iGladAfrica Championship
UButhelezi weNongoma FC uveza okwacishe kwamyekisa ebholeni
October 8, 2021 Impempe.com
UDABA: Sihle Ndlovu ISITHOMBE: Sihle Ndlovu Ukaputeni weNongoma FC uMusa Mazibuko uthi bekunzima kakhulu ukunyukela kwiKZN ABC Motsepe League ngoba bebeshoda ngezinto eziningi. Leli qembu laKwaNongoma selizodlala kwiMotsepe League ngemuva kokudla umhlanganiso kwiSAB League. Umasipala […]
Leave a commentEzakamuva, i-ABC Motsepe League
UMncwango wethembisa ukwesekwa kweNongoma FC ngumasipala
October 7, 2021 Impempe.com
UDABA: Sihle Ndlovu ISITHOMBE: Sihle Ndlovu Imeya yaKwaNongoma u-Albert Mncwango ithembisa ukuyeseka iNongoma FC esanda kunyukela kwiKZN ABC Motsepe League. UMncwango usho lokhu ngesikhathi kunomcimbi wokubungaza leli qembu elenze ezibukwayo emidlalweni yokuhlunga yeSAB League. Kugcina […]
Leave a commentAbasathuthuka, Ezakamuva, i-ABC Motsepe League
BAKHUZ’IBUYA: OSokhela babuyela ebholeni ngemuva kokudayisa AmaZulu
May 25, 2021 May 26, 2021 Impempe.com
UDABA: Alfred Ngubane ISITHOMBE: Twitter Ukhuza ibuya ebholeni mndeni wakwaSokhela obuphethe AmaZulu FC phambilini. Impempe ihletshelwe lezi zindaba ngumthombo osondelene kakhulu nalo mndeni, wathi uLunga Sokhela, noyise uPatrick Sokhela basezinhlelweni zokuthenga iqembu elidalala kwi-ABC Motsepe […]
MTHOKOZISI MNCUSENI Igcagcele esokeni emaqenjini ama-amesha kanjalo noseshini bebhola elingakhokheli kulandela ukuthi iSouth African Football Association (Safa) iqaqe amaketango abeboshwe ngenxa yeCovid-19. Kusukela kuqale ukubhebhetheka ngamandla kwe-Covid-19, ibhola lama-amesha belimisiwe. Amaligi asemaphandleni, emahositela kanjalo namaligi […]